Mihagasigasy kokoa ny Malagasy eo amin'ny interinety - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Akanjon-jazakely. Kilalao isan-karazany. Finday sy fakan-tsary ary solosaina na oridinatera. Karazan-damaody samihafa. Ireo no isan'ny lohalaharana sy maro mpizaha ao anaty facebook. Varotra, tolotra sy tinady eto ny resaka. Mahazendana ny vidiny. Kanefa maro amin'ireo no fitaovana sy kojakoja efa nampiasaina. Ny finday no tena kely fa dada amin'ireo. Misy mahatratra hatramin'ny Ariary 2 tapitrisa. Ny fakan-tsary koa maro ny mahery kelin'izany. Manaraka io ny kilalao sy kojakojan-jazakely. Tsy an-tapitrisany ny vidin'ireto fa na izany aza kely lafo vidy toa volamena. Ireo kilalao mihodinkodina azo araikitra amin'ny fandrian-jazakely no tena maro mpitia. Sondriana eo mantsy ilay zaza rehefa atsilany iny. Ny reniny kosa afaka manao zavatra hafa. Izay rehetra jerena, mambabo ny efa niteraka.
Vitsy ny tolotr'asa na dia efa mba misy ihany aza. Deraina kosa anefa ilay toe-tsaina mifampizara. Izay mahalala dia mizara. Misy ny tena matotra, misy koa ny vazivazy fotsiny kanefa rehefa mifankazatra eo dia mahalala ny tena izy ihany. Na izany aza tena mbola songonan'ny mpizara tenin'Andriamanitra sy toriteny ary anatra sy moraly ny fifampizarana asa. Amin'ny samy Malagasy io. Mbola tsy tazana firy koa ny fifampizarana momba ny fianarana.
Loza sy fahasoavana
Faly ny mpanjifa fa tsy mitsiriritra loatra intsony izy mahita ny ananan'ny hafa. Indrindra fa ireo ananan'ny vazaha hitany amin'ny televiziona sy ny interinety. Afaka mividy izay takatry ny volany izy. Misy rahateo ny fifaninanana satria jeren'ny olona eo fotsiny izay lafo loatra. Milona eo.
Hirika sy lalana manafaingana ny fifampizarana ihany koa izy. Mbola takatry ny volan'ny sarambabeny mantsy raha ireo karazan-javatra ireo no jerena amin'ny interinety. Nefa mila mifampitaona. Na ho lasa tahirin'ny orinasa Facebook aza ireny tsy dia sarobidy loatra noho ny sary sy tantaram-pianakaviana. Mbola azon'ny orinasa sy sampan-draharaha samihafa amantarana kokoa ny mahaliana sy maharary ny tanora malagasy koa ireo. Azo ampiasaina hivarotana, hamokarana zava-baovao.
Efa lasa manahirana indray tato ho ato ny maneho hevitra amin'ny tele sy radio. Any amin'ny interinety indray no famaharana. Tany, ohatra, no nielezan'ilay fakitioran'ny orinasa Colas nanapoaka ny vato teny Avaratr'Ankatso. Mitentina Ar 60 tapitrisa latsaka kely nefa ny an'ireo mpamaky vato tsy nisy ampahafolon'io akory. Varotra ihany koa izany. Varotra "ita". Eo no anairana ny mpianatra sy mpampianatra hifampizara. Na mandrangaranga sazy sy sara aza ny fanjakana momba ny fampiasana interinety amina lafiny sasany, toro manitsy hifampizara ny tena ilaina andavanandro izany. Mbola eo koa ny momba ny fahasalamana. Nalaza farany teo moa ny varotra fanafody mahadomelina.
Eo no amohazana ny ray aman-dreny hikiry hamantatra ity tontolo vaovao ity. Raha variana mivarotra sy mividy fotsiny amin'ny interinety izy tsy hahalala ny ataon-janany ao koa. Mila pasitoraly koa io raha tena hikatroka ny katolika.
R. Dafy Antonio